Imikhiqizo ye-SPL: Imboni ye-Photovoltaic
Amandla elanga we-Photovoltaic atholakala ngokuguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi kusetshenziswa ubuchwepheshe obususelwa kumphumela we-photoelectric. Luhlobo lwamandla avuselelekayo, angashi futhi angangcolisi angakhiqizwa ekufakweni okusukela kuma-generator amancane okuzisebenzisela wona kuya ezitshalweni ezinkulu ze-photovoltaic.
Kodwa-ke, ukukhiqiza la ma-Solar Panels kuyinkqubo ebiza kakhulu yezindleko, esebenzisa amanani amakhulu we-Energy futhi.
Konke kuqala ngezinto zokusetshenziswa, okuyisihlabathi sethu. Amapaneli amaningi elanga enziwe nge-silicon, okuyiyona nto eyinhloko esihlabathini solwandle semvelo. I-Silicon itholakala kakhulu, okwenza kube yinto yesibili etholakala kakhulu eMhlabeni. Kodwa-ke, ukuguqula isihlabathi ku-silicon esezingeni eliphakeme kuza ngezindleko eziphezulu futhi kuyinqubo enamandla kagesi. I-silicon ehlanzekile kakhulu ikhiqizwa esihlabathini se-quartz esithandweni se-arc emazingeni okushisa aphezulu kakhulu.
Isihlabathi se-Quartz sincishiswe ngekhabhoni esithandweni sikagesi emazingeni okushisa> 1900 ° C kuya ku-silicon yebanga le-metallurgical.
Ngakho-ke, uma kukhulunywa ngokuqinile, imfuneko yokupholisa iyadingeka kakhulu kule mboni. Ngaphezu kokupholisa okusebenzayo, ikhwalithi yamanzi nayo ibalulekile ngoba ukungcola kuzovama ukuvimba ipayipi lokupholisa.
Ngokubuka kwesikhathi eside, ukuzinza kombhoshongo wokupholisa wesifunda ovaliwe kuphakeme kakhulu kunoshintsho lokushisa kwepuleti. Ngakho-ke, i-SPL iphakamisa nokuthi iHybrid Cooler isuse ngokuphelele indawo yokupholisa evulekile ngesishintshisi sokushisa.
Izici ezinkulu kakhulu ezihlukile phakathi kwe-SPL Hybrid Cooler nombhoshongo wokupholisa wesifunda ovaliwe nomunye umbhoshongo wokupholisa yilezi: Ukusebenzisa ukushintsha kwangaphakathi kokushisa kombhoshongo wokupholisa uhlukanise amanzi okupholisa wemishini (yamanzi angaphakathi) namanzi okupholisa okupholisa umbhoshongo (amanzi angaphandle) ukuqinisekisa ukuthi ukupholisa amanzi ahlala ehlanzekile lapho kusakazwa noma kufakwa imishini yokushisa. Uma kunjalo, kudingekile kuphela ukuhlanza umbhoshongo owodwa wokupholisa esikhundleni sawo wonke amapayipi amanzi okupholisa nemishini.